Mmetụta nke metal laser ọnwụ igwe ọnwụ ọsọ na ọnwụ àgwà
Anyị niile maara na ọsọ na ịdịmma na-adịkarị n'otu n'otu. Ịchụso ọsọ ọsọ ga-ebelata àgwà, na ịchụso àgwà ga-emetụta ọsọ. Ya mere, olee mmetụta nke ịkpụ ọsọ nke igwe laser igwe na-eme ka ọ dị mma? Ka anyị leba anya: The...
A na-ahụkarị mmejọ na ụzọ ọgwụgwọ nke igwe ịkpụ laser
➊ Enweghị laser na-arụ ọrụ 1. Buru ụzọ chọpụta ma tube laser n'onwe ya na-enye ìhè (nnwale na ọdụ ụgbọ mmiri ọkụ); 2. Enweghị ọkụ na oghere ọkụ laser tube, lelee ma mgbasa ozi mmiri dị mma (lee ma mmiri na-asọba na ọkpọkọ mmiri dị mma), dịka enweghị mmiri na-asọ ma ọ bụ ogbenye wa ...
Kedu ihe ndị na-emetụta ọnụahịa nke igwe na-egbutu laser igwe anaghị agba nchara?
Banyere ọnụahịa nke igwe eji egbutu igwe anaghị agba nchara, enwere ọtụtụ ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị ukwuu na obere laser, na ọnụahịa dị iche n'etiti ụlọ ọrụ ọ bụla dịtụ ukwuu. Ọ dị ezigbo mkpa iji nyochaa ihe nke ngwaahịa ịkpụ na ihe ndị a chọrọ maka ịkpụ acc ...
Otu esi ahọrọ igwe na-egbutu laser ziri ezi?
Ọtụtụ ndị ahịa na-eme nhazi mpempe akwụkwọ ga-ezute nsogbu ndị dị otú ahụ mgbe ha na-azụta igwe na-egbutu laser. Olee otú ịhọrọ a laser ọnwụ igwe? Kedu akụkụ ndị a kapịrị ọnụ? ▼1. Ihe kachasị mkpa na igwe ịcha ọkụ laser bụ laser....
Ọsọ ịkpụ nke ngwa Laser ga-emetụta ogo nke ịkpụ efere
Ike nke laser ga-emetụta ngwa ngwa nke ngwa ngwa laser, na ngwa ngwa nke ngwa ngwa laser ga-emetụta àgwà ịkpụ nke efere ahụ. N'okpuru ọnọdụ ụfọdụ nke ike laser, enwere oke oke nke igbutu ọsọ. Ọsọ ọsọ ma ọ bụ nwayọ ga-emetụta elu...
Igwe egbu egbu Laser kacha ere 2021
Igwe na-egbutu Laser bụ otu n'ime ngwa ọrụ aka nke onye ọ bụla nwere mmasị ma ọ bụ ụlọ ọrụ kwesịrị inwe. Site n'inye gị mgbanwe iji hapụ akara gị na ihe ọ bụla, ha bụ n'ezie ụzọ dị mfe iji nweta nhazi. Ebe ọtụtụ ndị nọ n'ahịa na ọtụtụ ihe ị ga-eche banyere ya, ọ nwere ike isi ike ịmata ...
Ngwakọ ịgbado ọkụ Laser na-agbaji site na njedebe nke brazing
Isi mmalite: Ringier-"International Industrial Laser Manufacturers" N'ọhịa nke ọla kọpa ịgbado ọkụ, na-acha anụnụ anụnụ diode laser ghọtara okpomọkụ conduction ịgbado ọkụ nke ọla kọpa ihe maka oge mbụ. Agbanyeghị, teknụzụ ịgbado ọkụ nke laser na-acha anụnụ anụnụ ka nwere oke ụfọdụ na omimi ...
Atụmanya maka ahịa laser ultrafast zuru ụwa ọnụ site na 2021 ruo 2030
Na nso nso a, Allied Market Research, otu ụlọ ọrụ nyocha ahịa mba ofesi, wepụtara akụkọ gbasara ahịa laser ultrafast zuru ụwa ọnụ. Dị ka akụkọ ahụ si kwuo, ahịa laser ultrafast zuru ụwa ọnụ ga-abụ ihe dịka ijeri US $ 1.47 na 2020, a na-atụkwa anya iru $ 5.18 ijeri na 2030. N'etiti 2 ...
Enwere ike laser kwesịrị ekwesị iji weld ihe ntụgharị uche dị elu
Edemede a sụgharịrị site na Raycus Ọnụ ọgụgụ ntinye nke ihe ntụgharị uche dị elu maka laser fiber adịghị elu, na-akpata nkwụsi ike na-adịghị mma nke usoro nhazi. Ma ịcha ma ọ bụ ịgbado ọkụ, ọ bụ nsogbu ọdịnala na...
Otu esi eme nchebe mmiri nke igwe ịkpụ laser
N'ebe ụfọdụ, ikuku oyi na-ahapụ naanị na March kwa afọ. N'agbanyeghị na okpomọkụ na-ebili n'April, Qingming na Guyu bụ oge mmiri ozuzo. Tinyere oge mmiri ozuzo na May na June, enwere ike ịsị na ọkara mbụ nke afọ dum dị ntakịrị iru mmiri. Ka okpomọkụ na-ebili, hu...
“Atụmatụ Afọ Ise nke 14” Mmepe nke ụlọ ọrụ nrụpụta igwe mpempe akwụkwọ (Oghere Usoro 1)
Nkeji edemede mbụ "atụmatụ afọ ise nke iri na anọ" Mmepe nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke mpempe akwụkwọ (Serial 1) n'ichepụta igwe mpempe akwụkwọ bụ usoro nhazi nhazi nke ngwa ígwè dị ka efere, profaịlụ na ọkpọkọ. Usoro a na-eji akwụkwọ ntuziaka, akụrụngwa izugbe o...
Ihe achọrọ maka ngwa igwe dị iche iche nke cutter laser
Na ngwa ngwa mmepe na ngwa ngwa nke teknụzụ laser, igwe na-egbutu fiber laser abanyela na ndụ anyị site na ubi mmepụta ihe. N'ime usoro anyị na-adaba adaba, a na-egbutu ihe ndị ọzọ dị iche iche. Otú ọ dị, mgbe ị na-eji fiber laser ọnwụ igwe ịkpụ dị iche iche ihe, ...